Dawo – II Corriere dello Sport ayaa ku adkaystay in Ronaldo aanu isagu sabab u ahayn guuldaradii Juventus ka soo gaadhay Atletico laakiin waxay siiyeen qiimayn 5/10 – Damqo
(DMN) : Talyaniga – Cristiano Ronaldo ayaa 90 daqiiqo oo adag ku soo qaatay garoonka kooxda Atletico Madrid ee Estadio Wanda Metropolitano kulankii lugtii hore ee Champions league wareegiisa 16ka kooxood wuxuuna la kulmayay orin kaga imanaysay jamaahiirta kooxdii uu hore Madrid ugula soo xifiltamay ee Atletico Madrid. Min bilawgii ciyaarta ilaa dhamaadkii kulankan Ronaldo ayaa marar kala duwan u jawaabay jamaahiirta kooxda Atletico Madrid isaga oo shanta farood ugu tilmaamayay in uu shan koob oo Champions League ah ku soo guulaystay isla markaana ayna iyagu waxba ku guulaysan.
Laakiin Ronaldo ayaan wax jawaab ah ku dhex bixin garoonka dhexdiisa wuxuuna qaatay habeen ay ciyaartoyda Atletico Madrid si buuxda u ilaaliyeen inkasta oo uu bilawgii darbo laaga xorta ah uu Jan Oblak ku qasbay in uu badbaadin fiican sameeyo.
Haddaba wargayska caanka ah ee La Gazzetta dello Sport oo dalka ka soo baxa ayaa Cristaino Roanaldo siiyay qiimayntii ugu liidatay ee ciyaartoydii kulankii Champions League waxayna soo raaciyeen qoraal ay ku sharaxeen sababta uu Ronaldo u fashilmay ee ay qiimaynta hoose u siiyeen.
La Gazzetta dello Sport ayaa Ronaldo siiyay qiimayn 4.5/10 ah taas oo la micno ah in tobankii darajo uu ka helay 4.5 kaliya waxaana qoraalka lagu yidhi: ” Waa wax aad u sahlan in aad ka cabato De Sciglio ama Bentancur . Juve waxay Ronaldo ula soo saxiixatay in uu farqiga u sameeyo kulamadaas. Kulankii Aletico, waxa uu u muuqday ciyaartoy kale oo kaliya”.
Laakiin wargayska II Corriere dello Sport ayaa ku adkaystay in Ronaldo aanu isagu sabab u ahayn guuldaradii Juventus ka soo gaadhay Atletico laakiin waxay siiyeen qiimayn 5/10 ah waxaana qoraalka lagu yidhi: “Muu ahayn dhibaatada dhabta ah ee Juventus ee Wanda Metropolitano, xataa haddii uu si cad bandhig hoose u sameeyay”.
Previous Manchester United Oo Beddelka Romelu Lukaku Ka Dooneysa Juventus Iyo Inter Milan
Next Inter-Rapid Vienna 4-0: Spalletti ayaa u gudbay wareega labaad,